Unganditsanangurira here izvo zvinodiwa zvekutsvaga injini yekunyora?
Pane zvitatu zvakanyanya-zvinoshandiswa pakutsvakurudza uko iwe unoda kutumira nzvimbo yako - Google, Bing, uye Yahoo. Kana iwe webhusaiti yako ichisvika pane peji rekutanga reSERP yeiri dzose idzi dzekutsvaga, chiratidzo chakanaka kwauri chinoratidza kuti site yako yakanyatsogadziriswa uye yakatumirwa. Zvisinei, kana risina kuuya pedyo neHOT, zvinoreva kuti vashandi venyu vangave vasingakwanisi kuwana iwe webhu yako uye iwe unorasikirwa nemikana yako yekuwedzera mari yako uye kuvandudza marimi ako. Kuti uvandudze mamiriro ezvinhu aya, unoda kuita webusaiti yezvekuvandudzwa kwewebsite, kutungamira kukunda kambani yekutsvaga uye zvakare-kutumira webhu yako yekutsvaga kutsvaga injini.
Sei ndichifanira kuisa nzvimbo yangu kutsvaga injini?
Fungidzira mamiriro ezvinhu awakambogadzirisa nzvimbo yako uye wakatora nzvimbo yekugadzirisa nzvimbo, asi nzvimbo dzako dzichiri pasi. Chii chinogona kuva chikonzero chacho? Ndiri kukutaurira chakavanzika chinoita kuti uve nemigumisiro yakaipa zvakadaro. Tsvaga injini haigoni kungoongorora maitiro ako SEO sezvo iwe usingaisisi nzvimbo yako kune maitiro avo. Nokuisa pasi pewebsite yako kutsvaga injini, unotora mazita pavari uye unogona kukwezva tsvakurudzo yekutsvaga kwepamhando. Uyezve, unogamuchira mukana wokuratidza mitsva yako yose webhusaiti inovandudzwa uye kuchinja nokukurumidza apo iwe unovashandisa. Vafiniti vepaIndaneti vanobatsirwa nekuendesa mavhidhiro emabhuni avo kutsvaga injini sezvavanogona kuvandudza mararamiro avo uye kusimudzira mutengo wekutendeuka.
Nzira yekutungamira sei kutsvaga injini?
Zviri nyore kutumira nzvimbo yako kuGoogle. Iwe unoda kubhadhara chero mari yekubhadhara kana kuzadza mafomu ekunyora kwenguva refu. Nekuisa pasi pewebsite yako kuGoogle, unofanirwa kuisa nzvimbo yako neGoogle Search Console. Mushure maizvozvi, iwe unofanira kuenda kuGoogle web page ye URL inotumira. Kuti upedze basa iri, unoda kuisa yako webhusaiti URL mubhokisi rekutsvaga, simbisa kuti iwe uri munhu nekuisa cheki "Handizi irobhoti" uye bhura "Wedzera URL. "Zvakare, zvinokurudzirwa kutumira mapepa ako webhusaiti kuburikidza neGoogle Search Console.
Unogona kutumira site yako kuBing nenzira imwe chete yaunopa nayo kuGoogle. Kuti ubhabhatidze nzvimbo yako neyiyi, unofanirwa kuenda kuBing's Webmaster Tool uye nyora apo semushandisi. Kana uchangobva kuwanika, unoda kuisa URL yako yepamusha uye bhura "Bhodha". Mushure mokutumira nzira, unofanirwa kuongorora unhu hwako hwemasimba. Kuti upedze hurongwa hwekuongorora, unoda kuwedzera chikamu chekhodi ye HTML kune musoro we site yako.
Kubvira munguva ichangopfuura, Microsoft ine mabhizinesi maviri eBing ne Yahoo. Zvinoreva kuti paunotumira nzvimbo yako kuBing, iwe uchazoonekwawo mune Yahoo search results. Munguva yapfuura, Yahoo kutumira nzira yakabhadharwa. Zvisinei, mazuva ano iyi shanduro haisisipo Source .